Arrin ay aad ugu dhibban yihiin dadka reer Muqdisho oo halkeedii kasii socota (Maxaa dhacay habeen hore?) | Hadalsame Media
Home Maqaallada Arrin ay aad ugu dhibban yihiin dadka reer Muqdisho oo halkeedii kasii...
Arrin ay aad ugu dhibban yihiin dadka reer Muqdisho oo halkeedii kasii socota (Maxaa dhacay habeen hore?)
(Hadalsame) 06 Okt 2021 – Habeen hore waqti dambe ayaan islaan xaamilo ah Gubta ka qaaday. Waxaan geeyay isbitaalka Ayaan. Dhiigga HB-ga ayaa aad u liitay. Isbitaallada magaalada ee waawayn ayay noo direen. Waddada Ifka Xalan waa xiran tahay oo waxaa ku go’an dhagxaan. Waxaan ku qasbanaannay in aan ka soo wareeganno waddada Miisaanka Dhuxusha.
Halkaas marka aad ka soo gasho wax u dhow ma ahan isbitaalladii aad u socotay oo waxaad soo dhexmaraysaa Towfiiq oo degmada Yaaqshiid ah. Intii aan waddada ku sii soconnay ayay haweenaydii xaamilada ahayd ku sii sakaraadday waddada.
Shacabka deggan Gubta aad ayay ugu dhibqabaan xirnaanshaha waddada Ifka Xalan. Markii hore waxaa loo oggolaa Bajaajyada oo keliya, hadana inta dhagxaantii la isku dhoweeyay ayaa waxaa habeen walba ka dhasha jaamka aad aragtaan. Dadku badanaa laamiga dhexdiisa ayay bajaajta uga degtaan oo jaamka daraadiis ayay u soo lugeeyaan ilaa xaafadaha Gubta.
Waxaa wax la la yaabo ah in dhammaan laamiyadu ay u wada furan yihiin Waddada Warshadaha. Ka soo billow Ex-control Balcad, Miisaanka, Efeeko, Tarraqa iyo sigaarka oo la dhisayo, Shiirkole ilaa iyo Aargada Dayniile.
Dhammaan waddooyinkaas waa furan yihiin oo gawaarida inta la baaro ayaa la fasaxaa. Marka maxaa hortaagan in waddada Ifka Xalan la furo si la mid ah sida waddooyinkaas oo kale, mise Gubta ayaan Xamar ka tirsaneyn oo anigaa ka dhacsan. Xitaa isgoyska Ifka isaga oo xiran oo dhagxaan lagu jaray waxaa jooga ciidan aan fahmi waayay muhiimadda ay meesha u fadhiyaan maadaama dhagxaantaasu ay ku filan tahay.
Cid walba oo ay u xiran tahay ama masuuliyaddeeda leh waa in ay ogaataa in kumannaan dad ah ay u dhibaatoonayaan xirnaanshaha macnadarrada ah ee waddadaas.
Islaamka waxaa ugu hooseeya in jidka laga leexiyo waxa dadka dhibaya.
Waxaa Qoray: Aqwaan Xasan Jidhi
Previous articleHowl xasaasi ah oo saxaafadda maxalliga laga doonayo xilliyada doorashada oo maqan
Next articleDHEGEYSO: Sweden oo xirfad ku daraysa barashada SFI-ga & nin la diley oo la la’yahay ciddii….